मसँग कति सम्पत्ति छ, हिसाबै छैन (भिडियोसहित) « Janata Samachar
प्रकाशित मिति :2April, 2019 12:58 pm
‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ केही दिनअघि सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनसँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण सहज भएको छ । सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अवधारणा कार्यान्वयनमा सम्मेलन सेतु बनेको छ । सम्मेलनपछि मुलुकको विकासले गति लिन अपेक्षा गरिएको छ । यही सन्दर्भमा नेपालमा लगानी गर्दै आएका गैर आवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले जनता टेलिभिजनको द भ्यु विचार मन्थनमा आफ्ना केही धारणा राख्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
सिरहाको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको मानिस आज संसारकै एक धनाढ्य बन्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
जबसम्म यस्तो ठाउँमा पुगिदैन तबसम्म यो अफ्ठ्यारो लाग्ने गर्छ तर आज यो ठाउँमा पुगिसकेपछि मलाई यस्तो लागेको छ की कुनैपनि मानिस यो ठाउँमा पुग्न सक्छन् ।
आज तपाईसँग जति सम्पति छ, त्यसको कारणले यहाँ अत्यन्तै खुशी हुनुहुन्छ या तनावमा ?
आफूले कमाएको सम्पतिमा त आनन्द आउँछ नै । मसँग नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट दुबै छ । त्यसैले विदेशमा नेपालको अवस्थासँग दाँजेर जुन मलाई नेपाली भनेर व्यवहार गरिन्छ, त्यसले मलाई सधैँ घच्घच्याइरहेको हुन्छ र पीडाबोध पनि गराइरहन्छ ।
सम्पतिको भूमिका के देख्नुहुन्छ आनन्दमा ?
म व्यवसायी भएकोले कमाइमा नै आनन्दित हुन्छ ।
तर सम्पतिको पछि लाग्दा मान्छेहरु सुखी भन्दा दुखी धेरै हुन्छन् भनिन्छ, यहाँको अनुभव कस्तो छ ?
यस्ता अनुभव पनि धेरै छन् । नेपालमा त त्यति यस्तो देखिदैन तर बाहिर त्यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । तर मेरो यसमा बैग्लै अनुभव छैन । म कहिल्यै पनि सम्पतिको पछि लागेर आफू दुखी भएको छैन । पैसा कमाएको हकमा आत्माशान्ति नै छ । तर मेरो चाहना देशलाई समृद्ध बनाएर विकसित देशको नागरिक भएर जिउने छ ।
सम्पति चाहिँ कति छ, यहाँसँग ?
विभिन्न क्षेत्रका धेरै कम्पनीमा लगानी भएकोले मसँग सम्पति यति नै छ भनेर हिसाब गरेको छैन ।
यसरी बेहिसाब सम्पति कमाउन जो कोहीका निम्ति सम्भव छ ?
त्यस्तो होइन, हेर्नुहोस् हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि एकैपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन । स्कुलदेखि नै उहाँ राजनीतिमा जोडिनुभएको थियो । पत्रकारीताको पनि एउटा तहबाट अगाडि विकास हुँदै जान्छ । व्यवसाय पनि त्यस्तै कुरा हो । गर्दै जाँदा साधारण मानिस पनि धनी बन्न नसक्ने होइन । सफलताका ३ वटा पिलर हुन्छन् । मेहनत, इमान्दारिता र भाग्य वा अवसरले सफलता प्राप्त हुन्छ ।
मैले आजसम्म आफूलाई ग्लानी महशुस हुने कुनै काम गरेको छैन
एकजना फ्रेन्च दार्शनिक ‘प्रोपटी इज ए थेप्ट’ भन्छन्, यसमा के छ यहाँको टिप्पणी ?
त्यो गलत हो । दार्शनिक रुपमा भन्ने हो भने सबै कुरा थेप्ट हो । यसका आधारमा भन्ने हो भने हिजो मसँग थिएन आज मसँग छ । यो पनि त चोरी नै हो नी ? म विद्धान हुने कुरा पनि त चोरी नै हो । त्यसैले यो दार्शनिक रुपमा सही होला तर व्यवहारिक रुपमा सही होइन ।
धन प्राप्तिको प्रकृया त संशयपूर्ण छ नि, मान्छेहरुले यस्तो प्रश्न पनि गरिरहेका छन् ?
धनी हुने सबैको इच्छा छ तर आफू धनी हुन नसक्दा धनीको कुरा काट्ने चलन छ । मान्छेले अत्याधिक कुरा काटिसकेपछि धनीलाई पनि कतै आफूले पापै गरेर धन कमाएको हुँ की भन्ने भ्रम हुन्छ । यसकारण धन कमाउनु राम्रो हो भनेर उसले अरुलाई पनि उत्साह जगाउन सक्दैन । तपाईले भनेजस्तै २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो समस्या धनी र गरिबबीचको खाल्डो नै हो ।
कानुन मिचेर पनि मान्छे धन कमाउन लागेका देखिन्छन्, यस्तो किन भएकाे होला ?
ट्याक्स छलेर धन कमाउन सकिँदैन, थोरै थप्न मात्रै सकिने हो । कसैले आफूले कमाएको धनमध्ये नतिर्ने करले उसलाई धेरै ठूलो धनी बनाउने होइन । यो कसैको कमाइ बन्दैन । तर यसमा अलिकति वास्तविकता पनि छन् । खासगरी विकाशोन्मुख देशमा यो समस्या देखिएको छ ।
तपाईले भनेजस्तो पुरानै प्रणालीमै रहेर केही सिमित देश तथा व्यक्तिले धन थुपार्ने र विकाशोन्मुख देशको स्थिति नसुध्रिने नै देखियो नि ?
हो, यहाँ एउटै गनुपर्ने के छ भने, अहिले हामीले भनिरहेको समाजवादउन्मुख अर्थनीति भन्नुको बाध्यता नै गरिब र धनीबीचको खाल्डोलाई कम गर्नका लागि हो । यसमा सरकारको नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
आज नाफाको लालसा बढिरहेको हुनाले नाफाको लागि मानवता बिर्सन्छ भनिन्छ नि ?
जसले नाफा कमाउँछ उसले समाजलाई पनि केही दिएको हुन्छ । यदि कोही नाफा कमाएर समाजलाई दिदैनन् र केवल नाफा मात्रै लिन्छ भने त्यो कर्तव्य पालना गरेको मानिँदैन ।
धन कमाउन कत्तिको इमान्दार हुनुपर्छ ?
यो त अनिवार्य छ । तर सबै त्यस्तै नहुन पनि सक्छन् । विभिन्न देशमा काम गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँकाे नियम पालना गरेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले आजसम्म आफूलाई ग्लानी महशुस हुने कुनै काम गरेको छैन । मैले जुन देशमा पेशा गरिरहेको छु, त्यहाँ समाजका लागि पनि केही न केही योगदान गर्दै आइरहेको छु ।
डा उपेन्द्र महतो
‘वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय उल्टिन सक्छ’ (भिडियोसहित)
उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको भएपनि आर्थिक संमृद्धिको जग खन्ने काम भने गरिरहेको
‘नीति नियम भन्दापनि नियतमा सुधार आउनु जरुरी छ’ (अन्तर्वार्ता)
जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सन्दर्भ’मा बोल्नुहुँदै खड्काले नीति नियमका साथै आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो